Ity dia a mpanohitra tsy misy tariby izay azo ampitaina tsy misy WIFI, Many of our mpanisa olona dia vokatra misy patanty. Mba hisorohana ny plagiarism dia tsy nametraka atiny loatra tao amin'ny tranonkala izahay. Azonao atao ny mifandray amin'ireo mpiasan'ny varotrao mba handefasao aminao antsipiriany misimisy momba ny kaonteran'ny olona anay.
Amin'ny vanim-potoanan'ny angona lehibe, Mpanohitra ny olonamahatonga ny angon-drakitra marina kokoa sy manamora ny orinasa. Infrared mpanohitra ny olona dia mety amin'ny tranomboky, gara, haingam-pandeha haingam-pandeha, fivarotana finday, tsena talenta, efitrano fandraharahana fifandraisan-davitra, biraom-panjakana, fivarotana lehibe, rojo fitafiana, any amin'ny seranam-piaramanidina lehibe, tranombakoka siantifika sy teknolojia ary toerana hafa, tsy toy ny axis mpanohitra ny olona, ny mpanohitra ny olonaan'ny MRB dia antsasaky ny haben'ny carte de crédit fotsiny. Tena mety ny mametraka, manisa roa, manavaka tsara ny làlan'ny fidiran'ny mpiasa sy ny fivoahany, ary ny fametrahana tsy mila tariby. Ny varavarana detection maximum dia 40 metatra ny sakany, fandefasana data tsy misy tariby, ary ny halavirana fandefasana tsy misy tariby dia lava lavitra noho ny an'ny router tsy misy tariby.Mpanohitra ny olona mampiasa bateria lithium-ion ho an'ny famatsiana herinaratra, izay mety haharitra mandritra ny 2 taona, izay tsy mitovy amin'ny mpanohitra ny mpanohitra.
Ny tombony azo avy amin'ny vokatra ateraky ny mpanohitra MRB Infrared
1. Ny famolavolana mpanohitra ny olonatsotra sy malala-tanana. Ny endrika fisehoan'ny kaontera vaovao dia fohy kokoa, fametrahana visy, fametahana fanohanana.
2. Fiainana bateria lava kokoa, mpanohitra ny olona ny fiainana bateria dia mety hahatratra herintaona sy tapany, batterie lithium mahazaka 3.6V lehibe, voltage 1.5-3.6V, mampiasa AA (No. 5), fampifanarahana tsaratsara kokoa.
3. Ampitomboy ny seho LCD amin'ny mpanohitra infrareda, ny tahirin-kevitra miditra sy mivoaka dia mazava raha vao jerena, ary afaka mahita tsara ianao.
4. Fampitana data an'ny mpanohitra ny olonamilamina. Ny angon-drakitra ampitaina avy amin'ny kaonteran'ny mpandeha mankany amin'ny mpandray angona dia angon-drakitra nafenina avokoa, izay tsy manelingelina ireo fitaovana hafa ary azo antoka kokoa.
5. Fisorohana ny fitsabahan'ny hazavana amin'ny mpanohitra ny olona amin'ny fomba mahomby kokoa, ary hamaha ny lesoka fanisana nateraky ny fiovan'ny hazavana manodidina.
6. Ny angona famoahana fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny efijery fanaovana dokambarotra LED eo amin'ny anay mpanohitra infrareda, ary ny antontan'isa statistika dia azo vinavinaina amin'ny efijery fanaovana dokambarotra LED amin'ny alàlan'ny protokoloka mampiasa rindrambaiko ho an'ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy.
7. MRB Mpanohitra ny olona Afaka miditra amin'ny vera hiasa ara-dalàna raha tsy misy fanelingelenana avy amin'ny varavarana sy varavarankely
8. Vantany vao tonga ny taratra infrared an'ny Mpanohitra ny olona dia sakanan'ny olona na ny zavatra mihoatra ny 5 segondra, ny fampisehoana dia hampiseho ny lamina voasakana, ary ny jiro LED eo afovoan'ny RX dia hiposaka hanondroana fa misy ny sakana, ary ny data dia hotaterina amin'ny mpandray angona. Hisy ihany koa ireo rakitsoratra sy torohevitra mifandraika amin'ny rindrambaiko an'nympanohitra ny olona.
9.Mahafapo takiana isan-karazany namboarina, ny LOGO an'ny mpanjifa dia azo ampidirina ao amin'ny mpanohitra ny olona vatana na boaty fanomezana.
10.MRB mpanohitra ny olona halavirana bebe kokoa: fametrahana hatramin'ny halaviran'ny 1-40 metatra.
11. Ity mpanohitra ny olona azo ampiasaina amin'ny fifehezana ny fibodoana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko
General Mpanohitra ny olona
Herin'aratra 1.5v / 3.6v bateria AA na lithium ho an'ny sensor; Adapter / USB mandeha ho an'ny DC
lafiny 2.5 x 2.3 x 0.98 "
Temperature miasa -10 ~ 40 ℃
Loko Fotsy, na namboarina
Fametrahana Fivarotana rehetra, tranomboky, tranombakoka, hopitaly, sekoly
Operating ankehitriny ho an'ny mpandray (RX) 180μA
Static State amin'izao fotoana izao ho an'ny mpandray (RX) 70μA
Operating amin'izao fotoana izao ho an'ny Transmitter (TX) 200μA
Fomba fikarohana Taratra Infrared
Fomba fanisana Voatifitra sy alokaloka avy hatrany ary manisa
Data Transmitter Period 5 minitra avy amin'ny RX mankany DC - namboarina; Avy hatrany - DC mankany amin'ny lozisialy
RF Frequency Frequency 433MHz, Encrypted
Fomba fifandraisana RX mankany DC amin'ny alàlan'ny RF Transmission, DC mankany amin'ny solosaina amin'ny tariby USB;
Rindrambaiko mijoro irery Ho an'ny fivarotana famantarana, ambonin'ny windows 2003
Rindrambaiko amin'ny tambajotra Ho an'ny fivarotana rojo, manompo eo ambonin'ny windows 2003 sy SQL2005.
hahavony 1.2 metatra, mifanatrika
MANERAN- ≤20 metatra
Fomba raikitra Sokiro na sticker
Manomboka amin'ny Sensors mankany DC ≤40 metatra
Manana karazana IR maro isika mpanohitra ny olona, 2D, 3D, AI mpanohitra ny olona, misy hatrany izay mety aminao, azafady mba mifandraisa aminay, hanoro ny mety indrindra izahay mpanohitra ny olona ho anao ao anatin'ny 24 ora.
Horonantsary mpanohitra olona tsy misy tariby HPC005
Teo aloha: Ny olona nomerika nomerika MRB dia mifanohitra amin'ny HPC005U
Manaraka: MRB Fisakanana andiany HPC
Counter Beam Infrared
Kaonteran'ny fifamoivoizana tsy maharitra
Kaontera fifamoivoizana MRB ho an'ny olona mpivarotra ...